The scrap price cuts for high nickel pig iron compared with scrap. This week, the price of stainless steel fell, which led to a decline in the scrap market price. 304 scrap stainless steel fell by nearly 500 yuan/ton from the end of October. However, the high nickel pig iron is currently being pu...GỤKWUO »
The surface color of today's stainless steel screens is different from general color products. General color products can be made by spraying or water dyeing, but they are easy to fade and fade in the air or rain. The difference of the color stainless steel screen is that its processing technolog...GỤKWUO »
Isi nzube na ji achọ ọrụ nke igwe anaghị agba nchara ihuenyo
Ebumnuche bụ isi nke ihuenyo ahụ bụ ikewapụ, ikpuchi na icho mma. Ọ nwere ike ime ka ime ụlọ ahụ nwee oghere nwere ọtụtụ ọkwa, na-eji nhazi ịchọ mma, dịka ọmụmaatụ, maka ezinụlọ nwere obere ebe obibi, mgbe ekwesịrị ka ekewaa ụlọ n'ime ime ụlọ na ụlọ nzukọ na ụlọ ọmụmụ ihe, enyo. nwere ike ...GỤKWUO »
Kedu ka ihu igwe anaghị agba nchara kwesịrị ịdị?
Usoro nchara nke igwe anaghị agba nchara na -eji teknụzụ ịcha laser. Mbelata laser nwere oke. Ọ na -esi ike ịbelata oke efere. Mpụta ya adịchaghị larịị, na burrs na -adịkarị mfe ịpụta na ịkpụ. Ọ na-achọkwa ịchacha na imecha ọzọ, nke na-ewe oge. Ọ ...GỤKWUO »
Usoro nhazi igwe anaghị agba nchara pụrụ iche!
Nzọụkwụ ndị bụ isi na nhazi igwe anaghị agba nchara nwere mpempe akwụkwọ pụrụ iche gụnyere ịcha, ihu, ihu, ịgbado ọkụ, rivets, ịgụta ọnụ na ọgwụgwọ elu. Usoro nhazi nke akụkụ mpempe akwụkwọ bụ dị ka ndị a. 1. Chepụta eserese nke akụkụ igwe anaghị agba nchara nwere ụdị pụrụ iche, ...GỤKWUO »
Stainless steel stairs are popular both indoors and outdoors, and it is also one of the most common stairs. What should we pay attention to when installing stainless steel stairs? 1. Precautions for installation of stainless steel stair poles 1. The installation of railings should be carried out...GỤKWUO »
Dị ka akụkọ CCTV kacha ọhụrụ si kwuo, "igwe anaghị agba nchara" nke China Baowu Taiyuan Iron and Steel Group mepụtara dị gịrịgịrị karịa akwụkwọ, yiri enyo, ma sie ike n'ụdị. Ọkpụrụkpụ bụ naanị 0.015 mm. Nchịkọta nke mpempe akwụkwọ nchara 7 bụ akwụkwọ akụkọ. ọkpụrụkpụ. A kọrọ na nke a ...GỤKWUO »
Njirimara na ọrụ aka nke igwe anaghị agba nchara
1. Njirimara ahịrị igwe anaghị agba nchara ahịrị ahịrị igwe anaghị agba nchara nwere njirimara nchedo gburugburu ebe obibi, mgbochi corrosion, mgbochi mmiri, mgbochi abrasion, nguzogide abrasion, na nguzogide ihu igwe. Elu ya dị larịị, dịkwa ọcha ka enyo. Ọ bụ ihe ịchọ mma dị elu ...GỤKWUO »
N'ọnọdụ ndị dị a stainlessaa ka igwe anaghị agba nchara nwere ike ịta nchara?
Ọ bụ ezie na igwe anaghị agba nchara na-ekwu na ọ bụghị nchara, ọ bụ naanị nchara nchara. Ọ nwere ike na-adịte aka ma ghara ịta nchara mgbe ejiri ya mee ihe nke ọma. Ya mere, n'ọnọdụ dị a isaa ka igwe anaghị agba nchara dị mfe nchara? Ka onye ọchụnta ego igwe anaghị agba nchara gwa gị! Ọ bụrụ na gburugburu ebe obibi dịtụ mmiri mmiri, yabụ ...GỤKWUO »
Kedu nke ka mma maka igwe anaghị agba nchara ma ọ bụ alloy aluminom
Panel igwe anaghị agba nchara ka mma; Uru nke igwe anaghị agba nchara: 1. nguzogide corrosion: ogwe nchara anaghị agba nchara na mgbasa ozi alkaline na -adịghị ike dịka ikuku, uzuoku, na mmiri. 2. Na -adigide: Ogwe igwe anaghị agba nchara nwere ike siri ike, na -adigide na ọ naghị adị mfe nrụrụ. 3. Mma ...GỤKWUO »
N'ime ọkara mbụ nke afọ, mmepụta nchara nchara zuru ụwa ọnụ mụbara site na 14.4% afọ-afọ
N’oge na -adịbeghị anya, World Steel Association (WSA) wepụtara data gbasara nrụpụta nchara nchara zuru ụwa ọnụ maka June. N'ọnwa June, nrụpụta nchara nchara nke mba na mpaghara 64 gụnyere na ọnụ ọgụgụ World Steel Association bụ nde tọn 167.9, mmụba nke otu afọ na 11.6%. Na ọkara mbụ nke ...GỤKWUO »
Sharma, onye isi njikwa JSPL, kwuru na India ga -abụ mba kacha ebupụ ngwa ahịa nchara n'ụwa
Dabere na VR Sharma, onye isi njikwa Jindal Steel na Electric Power Company (JSPL), India ga -akarị China n'ime afọ ole na ole sochirinụ wee bụrụ onye na -ebubata nchara kacha ukwuu n'ụwa na mmụba ikike, ihe nchara ụwa na mmachi mbupụ China. "India na -aga n'ihu ...GỤKWUO »